Xubinta Galmada | Zanzu
Xubnaha muhiim ahaan loo isticmaalo in carruur lagu dhalo. Xubnaha taranka waxay muhiim u yihiin la kullmida farxada galmada. Ninka iyo haweenku waxay leeyihiin xubnaha taranka la arki karo aan la arki karin (gudaha). Xubnaha taranka la arki karo (dibada) yusaale ahaan waa guska ninka iyo faruurta siilka haeenayda iyo xubnaha taranka aan la arki karin (gudaha) wa tusaale ahaa borostaydka ninka iyo ilma galeenka haweenayda.
Standard term: Geslachtsdeel
Neutral term: Geslachtsorgaan
Xubnaha taranka haweenayda muuqda
Xubnaha taranka la arki karo ee ninka